မိမိ မွေးနေ့ နဲ့ ဗေဒင် တွက်ကြရအောင် ..! - APANNPYAY
Home / ဗေဒင်ကဏ္ဍ / မိမိ မွေးနေ့ နဲ့ ဗေဒင် တွက်ကြရအောင် ..!
မိမိ မွေးနေ့ နဲ့ ဗေဒင် တွက်ကြရအောင် ..!
Apann Pyay 5:11 PM ဗေဒင်ကဏ္ဍ Edit
ဥပမာ။ ။ တွက်မယ့်သူရဲ့ မွေးနေ့က အောက်တိုဘာလ၊ ၈ ရက်နေ့ ၊ ၁၉၅၀ ဆိုရင်လ + ရက် + နှစ် = ၁၀ + ၈ + ၁၉၅၀ = ၁၉၆၈ ဒီလိုလေး ရိုးရိုးလေး ပေါင်း လိုက်ပါ။ပြီးတော့ ရလာတဲ့ အဖြေ ၁+၉+၆+၈ = ၂၄
ပြီးတော့ ရလာတဲ့ အဖြေ ၂+၄ = ၆ဂဏန်းတလုံး ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်တာပါ။ ပြီးရင် အောက်မှာ သူ့ နံပါတ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အဖြေတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါင်းလိုက်တဲ့ ဂဏန်းတစ်လုံးက—–
၁ ဆိုရင် လောကမှာ မရှိသေးသောအရာတွေကို တီထွင် ဖန်တီးသူ
၁ ဂဏန်းရသူတွေဟာ မူလဖန်တီးသူတွေပါ။
သူတို့တွေဟာ ဆန်းပြားတဲ့ အတွေးတွေ အိုင်ဒီယာ တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေပါ။ ကိုယ့်ကိုတိုင် စဉ်းစား တွေးခေါ်နိုင်တဲ့အတွက်လည်း ခေါင်းမာပါတယ်၊ မိမိယုံကြည်ချက်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ မလျှော့ပါဘူး ဒါကြောင့်လည်း ဘ၀မှာ တခါတရံ အောင်မြင် တတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ရိုးသားပါတယ် ခေါင်းမာတယ်ဆိုသော်ငြား လည်း သူတို့မှာ သူတစ်ပါးသူတိုိ့ဘက်ပါအောင် စည်းရုံးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အလုပ်တွေမှာခေါင်းဆောင် သို့မဟုတ် သူဌေး
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သတိထားစရာ အချက် ကတော့ မိမိမှာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းသော်လည်း လောကမှာ မိမိထက် သာသူတွေ ရှိတတ်စမြဲ ဖြစ်တာကြောင့် ခေါင်းမမာသင့်ဘဲ တခြားသူ အကြံဥာဏ်ကို လက်ခံလျှင် ဘ၀မှာ ပိုအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။
အောင်မြင်သူ ၁ ဂဏန်းသမားများ – Tom Hanks (Hollywood ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ ဒါရိုက်တာ၊ Robert Redford ( Hollywood ရုပ်ရှင်မင်သား၊ ဒါရိုက်တာ၊စာရေးဆရာ ) Nancy Reagan ( အမေရိကန် သမ္မတ ရောနယ်ရေဂင် ၏ ဇနီး ) စသဖြင့် အများကြီးရှိသေး
၂ ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးသမား
၂ သမားတွေက ဗီဇကိုက သံတမန်လို ဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ပါး သူရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ခံစားချက်တွေ ကို အရင်ဆုံး စဉ်းစားသုံးသပ်လေ့ ရှိတယ်၊ သိလည်း သိတယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ဦးတည်းနေရတာကို သဘော မကျ ပါဘူး၊ ဆွေမျိုး သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေ ဟာ သူတို့ အတွက် အလွန် အရေး ကြီးပါတယ်။ ဘ၀မှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် သူတို့မှာ သူငယ်ချင်း ကောင်း သို့မဟုတ် ပါရမီဖြည့်ဘက် ကောင်း လိုအပ်ပါတယ်။
အောင်မြင်ကျော်ကြားသူ ၂ ဂဏန်းသမား – အမေရိကန်သမ္မတ Bill Clinton၊ မက်ဒေါနား၊ သောမတ်အက်ဒီဇင်
၃ ဆိုရင် အတွေးအခေါ်ကောင်းသူ
၃ တွေက ထိုးထွင်းတဲ့ ဥာဏ်ရှိတယ်။ ဆွဲဆောင်မူကောင်းတယ်၊ romantic ဖြစ်တယ်၊ ပြီးတော့ အေးဆေး သမားတွေပါပဲ။ သူတို့တွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်အောင် နေထိုင်တတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက် သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ရှိလိမ့်မယ်၊ ချစ်ခင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် နေတတ် တဲ့အတွက်လည်း လူချစ်လူခင် များပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ သူတစ်ပါး ပျော် အောင်လည်း အမြဲလုပ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ တွေဟာ နာမည်ကြီးတတ်ပါတယ်။အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများကတော့ – Bill Cosby ( အမေရိကန်ဟာသ ပညာရှင်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ စာရေးဆရာ ) ၊ Jodi Foster ( ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ )
၄ ဆိုရင် ရှေးရိုးဝါဒီ
၄ တွေဟာ စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်ပါတယ်။ အသိတရားရှိတယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်ပြောမလဲ ဘယ်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက် သူတွေ ဖြစ်တယ်၊ အလိုက်သိတတ်တယ်။ သူတို့ဟာ အရာတခုကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်မှ အဲ့အလုပ်ကို စလုပ်တယ်၊ မပေါက်သေးရင် အရင်ဆုံး နားလည်အောင် လုပ်ပြီးမှ အဲ့အလုပ်ကို စလုပ် ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သဘာဝအလှကို နှစ်သက်သူတွေဖြစ်ရာ ခရီးသွား ခြင်း ကို အထူး စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေမှာ မဆုတ်မနစ် လုပ်တတ်တဲ့ သဘောသဘာဝ ရှိရာ တခါတရံ အလွန်ခေါင်းမာ တတ် ပါတယ်။ ဇွဲ ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်လည်း သူတို့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အောင်မြင် တတ်ပါတယ်။
အောင်မြင်သူများ – ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၊ မာဂရက် သက်ချာ (Margaret Thatcher -ဗြိတိန် ရဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ်) ၊ အာနိုး (Arnold Schwarzenegger)၊Oprah Winfrey (မင်းသမီး၊ အမေရိကန် TV show တွေမှာ အောင်မြင်နေသူ )၊
၅ ဆိုရင် သူများနဲ့ မတူ ထူးခြားသူ
၅ တွေဟာ စူးစမ်းရှာဖွေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဗီဇကိုက စပ်စုတတ် တယ်၊ ကျရူံးမှာလည်း မကြောက်တတ်ပါဘူး။ အတန်းထဲမှာ ဆိုရင် မေးခွန်း တွေ တခုပြီးတခု သူတို့ ခေါင်းထဲမှာ ထွက်ပေါ်လာတတ် တယ်။ ဥာဏ်ထက်သူဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူတို့မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ ဖြေသူက တော်တော် လေးကို ကျွမ်းကျင်မှ သူတို့ သဘောကျ တဲ့ အဖြေကို ရတတ်တယ်။ သူတို့လေးတွေ သတိထားဖို့ကတော့ အကြောင်းအရာတခုကို အလုံးစုံနားလည်အောင်ထောင့်ပေါင်းစုံက ချဉ်းကပ်လေ့လာပြီးမှ ကောက်ချက် ချသင့်ပါတယ်၊ မဟုတ်ရင် အမှားတွေ လုပ်မိတတ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရင်လည်း သူဟာ အဲ့အတိုင်း လုပ်တတ်လို့ပါ ဒါကြောင့် အရာအားလုံးကိုကောင်းကောင်း လေ့လာစေချင်ပါတယ်။
အောင်မြင်သူများကျော်ကြားသူများ – ဟစ်တလာ၊ မော်စီတုန်း၊ လင်ကွန်း (အမေရိကန် သမ္မတ)၊ Helen Keller
၆ ဆိုရင် စိတ်ကူးယဉ် ဆန်သူ (သို့) သဘာဝအလှတွေ၊ သဘာဝ အဖြစ်အပျက်တွေကို စိတ်ကူးဖြင့် ဖော်နေရာမှာ စိတ်ကူးကောင်းသူ
၆ တွေဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစု စုစုဝေးဝေး နဲ့ နေထိုင်ရတာကို သဘောကျသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သစ္စာ ရှိသူ ဖြစ်ပြီး သူတစ်ပါး နားလည်သဘောပေါက်အောင်လည်း စွမ်း ဆောင် နိုင်သူ ဖြစ်ရာ ဆရာအလုပ်တွေမှာ အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေကို သစ္စာရှိသူဖြစ်ရာ မိမိကိုယ် သစ္စာမဲ့ ပြု လုပ်သွားပါက အငြိုးကြီးစွာဖြင့် တစ်သက်လုံး မခေါ်တတ်ပေ။ သူတို့ဟာ စိ်တ်ကူး စိတ်သန်းကောင်းသဖြင့် တခါတရံ လောကကြီးကို သူတိူ့ ဥာဏ်ပညာဖြင့် ပြောင်းလဲပစ်တတ်ပါတယ်။
အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများ – အိုင်စတိုင်း၊ ကိုလံဘတ်(စ်)၊ Jane Seymour ( အင်္ဂလန် ဘုရင်မ)၊ ဒေါ်ခင်ကြည် ( ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဇနီး)၊ ဦးညီပု (ပထမဆုံး မြန်မာသရုပ်ဆောင်မင်းသား)၊ ဦးကျော်ဟိန်း (ရုပ်ရှင်မင်းသား)
၇ ဆိုရင် ဥာဏ်ထက်မြက်သူ
၇ တွေဟာ ရှာဖွေရေးသမားလို့ ပြောလို့ မတတ်အောင်ကို အကြောင်းအရာ
တခုပြီးတခု အမြဲတမ်း လေ့လာ ရှာဖွေ နေတတ်သူပါ။ သူတို့ ကို puzzle game တွေ ဆော့ခိုင်းရင် အရင်ဆုံး အဖြေရှာနိုင်သူပါ။ သူတို့ဟာ အလုပ် တခုကို ဘယ်တော့မှ တစွတ်ထိုး မလုပ်ပါဘူး၊ဖြည်းဖြည်းနဲ့
အောင် မြင်အောင် လုပ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အတွေးအခေါ် ကောင်းသူ တွေ
ဖြစ်ပြီး ဗဟုသုတ လည်း နှံစပ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ လျှိဝှက်တတ်ပါတယ်။ သူတို့ ဘ၀ကို သူများတွေ လာစပ်စုတာကို မကြိုက်ပါဘူး။ အမြဲတမ်း လေ့လာ နေသူဖြစ်ရာ ဘာလုပ်လုပ် သူများထက်ကို သာ နေတတ်ပါတယ်။အောင်မြင်ကျော်ကြားသူ – ဦးဇာဂနာ၊ ဦးဇော်ဝမ်း ၊ မင်းသမီး ဒိုင်ယာနာ ၊ William Shakespeare ၊ Michael Jackson Galaxy
၈ ဆိုရင် ပြဿနာရပ်ရပ်တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်သူ
၈ တွေဟာ ပြဿနာအရပ်ရပ်တွေကို ခေါင်းအေးအေး နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်သူ ဖြစ် ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်း ရှိသူတွေ ဖြစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွေလည်း တိကျပြီး အကျိုးရှိတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မျိုးတွေ ချတတ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘ၀ ကို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဖြတ်သန်း ချင်သူ တွေဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ဖြတ်သန်းဖို့လည်း သူတို့မှာ စနစ်တကျ လုပ်ထား တဲ့ အစီအစဉ်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လူအများကို ဦးဆောင် နိုင်သူတွေဖြစ်ပြီး လူသားတိုင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်အများစုကို နားလည် သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားအများရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်း လိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေ ရှိပြီး ဖြစ်အောင်လည်း လုပ်ပေးနေတဲ့အတွက် သူတို့ ရဲ့ ဘ၀ဟာ သူတို့လိုချင်သလို ဖြစ်မလာတတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိမိ အတွက် နဲ့ တပါးသူ တွေ ရဲ့ အတွက် မျှမျှတတ စဉ်းစားပြီး လုပ်စေလိုပါတယ်။
အောင်မြင်ကျော်ကြားသူ – မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အပေါ်က ၈ အကြောင်းကို ဘာသာပြန်ရင်း အမေစု ဘယ်ဂဏန်းလဲ သိချင်တာ နဲ့ တွက်ကြည့်တော့ ၈ ဂဏန်း ရတာ တွေ့ရလို့ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါတယ်) ၊ ဆရာကြီး ဦးသုခ ၊ Edgar Cayce ( စိတ်ပညာရှင် အနောက်နိုင်ငံမှာ ဘ၀ကူးတယ်(သံသရာလည်ခြင်း) အဆိုကို လက်တွေ့ မှန်ကြောင်း လုပ်ပြသူ) ၊
၉ ဆိုရင် ဖျော်ဖြေသူ (သို့) ဂရုဏာရှင်
၉ သမားတွေဟာ ဖျော်ဖြေတက်ဆက်တဲ့ဘက်မှာ ထူးချွန်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ ဂရုစိုက်တတ်တယ်၊ ကူညီရိုင်းပင်းစိတ်ရှိတယ် နောက်ဆုံး သူ့မှာ ပိုက်ဆံ ၁ ထောင်ပဲ ကျန်လို့ အကူအညီတောင်းလာရင်တောင် သူ့ပိုက်ဆံ ကို သူများဆီ စွန့်ကြဲတတ်တယ်။ သူတို့ဟာ ဘ၀မှာ ကံကောင်းတတ်တယ်၊
ပြင်းပြင်းထန်ထန် အလုပ်ကြိုးစား စရာမလိုဘဲ စိုင်ကော်လို့ ချုံ ပေါ် ရောက် ဆိုသကဲ့သို့ မိမိဘက်မှ ကံတရားက အမြဲပါနေတတ်တယ်။ ကံအရမ်း ကောင်းသူပေ့ါ။အောင်မြင်ကျော်ကြားသူ – Elvis Presley (ပရက်စလေ ဂန္တ၀င်အဆိုတော်) ၊ Jimmy Carter ( အမေရိကန် သမ္မတ) ၊ Harrison Ford ( India Jones ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ) ၊ မာသာထရီဆာ( Mother teresa)
ဥပမာ။ ။ တှကျမယျ့သူရဲ့ မှေးနကေ့ အောကျတိုဘာလ၊ ၈ ရကျနေ့ ၊ ၁၉၅၀ ဆိုရငျလ + ရကျ + နှဈ = ၁၀ + ၈ + ၁၉၅၀ = ၁၉၆၈ ဒီလိုလေး ရိုးရိုးလေး ပေါငျး လိုကျပါ။ပွီးတော့ ရလာတဲ့ အဖွေ ၁+၉+၆+၈ = ၂၄
ပွီးတော့ ရလာတဲ့ အဖွေ ၂+၄ = ၆ဂဏနျးတလုံး ဖွဈအောငျ လုပျလိုကျတာပါ။ ပွီးရငျ အောကျမှာ သူ့ နံပါတျနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့အဖွတှေကေို ကွညျ့လိုကျရအောငျပေါငျးလိုကျတဲ့ ဂဏနျးတဈလုံးက—–
၁ ဆိုရငျ လောကမှာ မရှိသေးသောအရာတှကေို တီထှငျ ဖနျတီးသူ
၁ ဂဏနျးရသူတှဟော မူလဖနျတီးသူတှပေါ။ သူတို့တှဟော ဆနျးပွားတဲ့ အတှေးတှေ အိုငျဒီယာ တှနေဲ့ ပွညျ့စုံနတေဲ့သူတှပေါ။ ကိုယျ့ကိုတိုငျ စဉျးစား တှေးချေါနိုငျတဲ့အတှကျလညျး ခေါငျးမာပါတယျ၊ မိမိယုံကွညျခကျြကို လှယျလှယျနဲ့ မလြှော့ပါဘူး ဒါကွောငျ့လညျး ဘဝမှာ တခါတရံ အောငျမွငျ တတျပါတယျ။ သူတို့တှဟော ရိုးသားပါတယျ ခေါငျးမာတယျဆိုသျောငွား လညျး သူတို့မှာ သူတဈပါးသူတို့ဘကျပါအောငျ စညျးရုံးနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြး တှေ ရှိတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး အလုပျတှမှော
ခေါငျးဆောငျ သို့မဟုတျ သဌေး ဖွဈတတျပါတယျ။ သတိထားစရာ အခကျြ ကတော့ မိမိမှာ စိတျကူးစိတျသနျးကောငျးသျောလညျး လောကမှာ မိမိထကျ သာသူတှေ ရှိတတျစမွဲ ဖွဈတာကွောငျ့ ခေါငျးမမာသငျ့ဘဲ တခွားသူ အကွံဉာဏျကို လကျခံလြှငျ ဘဝမှာ ပိုအောငျမွငျတတျပါတယျ။
အောငျမွငျသူ ၁ ဂဏနျးသမားမြား – Tom Hanks (Hollywood ရုပျရှငျမငျးသား၊ ဒါရိုကျတာ၊ Robert Redford ( Hollywood ရုပျရှငျမငျသား၊ ဒါရိုကျတာ၊စာရေးဆရာ ) Nancy Reagan ( အမရေိကနျ သမ်မတ ရောနယျရဂေငျ ၏ ဇနီး ) စသဖွငျ့ အမြားကွီးရှိသေး
၂ ဆိုရငျ ငွိမျးခမျြးရေးသမား
၂ သမားတှကေ ဗီဇကိုက သံတမနျလို ဖွဈတယျ။ သူတို့ဟာ တဈပါး သူရဲ့ လိုအပျခကျြတှေ၊ခံစားခကျြတှေ ကို အရငျဆုံး စဉျးစားသုံးသပျလေ့ ရှိတယျ၊ သိလညျး သိတယျ။ သူတို့ဟာ တဈဦးတညျးနရေတာကို သဘော မကြ ပါဘူး၊ ဆှမြေိုး သူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျးတှေ ဟာ သူတို့ အတှကျ အလှနျ အရေး ကွီးပါတယျ။ ဘဝမှာ အောငျမွငျဖို့အတှကျ သူတို့မှာ သူငယျခငျြး ကောငျး သို့မဟုတျ ပါရမီဖွညျ့ဘကျ ကောငျး လိုအပျပါတယျ။
အောငျမွငျကြျောကွားသူ ၂ ဂဏနျးသမား – အမရေိကနျသမ်မတ Bill Clinton၊ မကျဒေါနား၊ သောမတျအကျဒီဇငျ
၃ ဆိုရငျ အတှေးအချေါကောငျးသူ
၃ တှကေ ထိုးထှငျးတဲ့ ဉာဏျရှိတယျ။ ဆှဲဆောငျမူကောငျးတယျ၊ romantic ဖွဈတယျ၊ ပွီးတော့ အေးဆေး သမားတှပေါပဲ။ သူတို့တှဟော ပတျဝနျးကငျြနဲ့ သဟဇာတ ဖွဈအောငျ နထေိုငျတတျသူဖွဈတဲ့အတှကျ သူငယျခငျြးတှေ အမြားကွီး ရှိလိမျ့မယျ၊ ခဈြခငျဖှယျဖွဈအောငျ နတေတျ တဲ့အတှကျလညျး လူခဈြလူခငျ မြားပါတယျ။ သူတို့တှဟော သူတဈပါး ပြျော အောငျလညျး အမွဲလုပျတတျတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ တှဟော နာမညျကွီးတတျပါတယျ။အောငျမွငျကြျောကွားသူမြားကတော့ – Bill Cosby ( အမရေိကနျဟာသ ပညာရှငျ၊ ရုပျရှငျမငျးသား၊ စာရေးဆရာ ) ၊ Jodi Foster ( ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ၊ ဒါရိုကျတာ )
၄ ဆိုရငျ ရှေးရိုးဝါဒီ
၄ တှဟော စဉျးစားခငျြ့ခြိနျတတျပါတယျ။ အသိတရားရှိတယျ၊ ဘယျအခြိနျမှာ ဘယျပွောမလဲ ဘယျလုပျရမလဲဆိုတာကို ကောငျးစှာ သဘောပေါကျ သူတှေ ဖွဈတယျ၊ အလိုကျသိတတျတယျ။ သူတို့ဟာ အရာတခုကို ကောငျးစှာ သဘောပေါကျမှ အဲ့အလုပျကို စလုပျတယျ၊ မပေါကျသေးရငျ အရငျဆုံး နားလညျအောငျ လုပျပွီးမှ အဲ့အလုပျကို စလုပျ ပါတယျ။ သူတို့ဟာ သဘာဝအလှကို နှဈသကျသူတှဖွေဈရာ ခရီးသှား ခွငျး ကို အထူး စိတျဝငျစားသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့တှမှော မဆုတျမနဈ လုပျတတျတဲ့ သဘောသဘာဝ ရှိရာ တခါတရံ အလှနျခေါငျးမာ တတျ ပါတယျ။ ဇှဲ ရှိတဲ့ အတှကျကွောငျ့လညျး သူတို့ လုပျငနျးတှမှော အောငျမွငျ တတျပါတယျ။
အောငျမွငျသူမြား – ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ၊ မာဂရကျ သကျခြာ (Margaret Thatcher -ဗွိတိနျ ရဲ့ ပထမဆုံး အမြိုးသမီး ဝနျကွီးခြုပျ) ၊ အာနိုး (Arnold Schwarzenegger)၊Oprah Winfrey (မငျးသမီး၊ အမရေိကနျ TV show တှမှော အောငျမွငျနသေူ )၊
၅ ဆိုရငျ သူမြားနဲ့ မတူ ထူးခွားသူ
၅ တှဟော စူးစမျးရှာဖှသေူတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ ဗီဇကိုက စပျစုတတျ တယျ၊ ကရြူံးမှာလညျး မကွောကျတတျပါဘူး။ အတနျးထဲမှာ ဆိုရငျ မေးခှနျး တှေ တခုပွီးတခု သူတို့ ခေါငျးထဲမှာ ထှကျပျေါလာတတျ တယျ။ ဉာဏျထကျသူဆိုရငျလညျးမမှားပါဘူး။သူတို့မေးလိုကျတဲ့ မေးခှနျးတှဟော ဖွသေူက တျောတျော လေးကို ကြှမျးကငျြမှ သူတို့ သဘောကြ တဲ့ အဖွကေို ရတတျတယျ။ သူတို့လေးတှေ သတိထားဖို့ကတော့ အကွောငျးအရာတခုကို အလုံးစုံနားလညျအောငျထောငျ့ပေါငျးစုံက ခဉျြးကပျလလေ့ာပွီးမှ ကောကျခကျြ ခသြငျ့ပါတယျ၊ မဟုတျရငျ အမှားတှေ လုပျမိတတျပါတယျ။ ဆုံးဖွတျခကျြခပြွီးရငျလညျး သူဟာ အဲ့အတိုငျး လုပျတတျလို့ပါ ဒါကွောငျ့ အရာအားလုံးကိုကောငျးကောငျး လလေ့ာစခေငျြပါတယျ။
အောငျမွငျသူမြားကြျောကွားသူမြား – ဟဈတလာ၊ မျောစီတုနျး၊ လငျကှနျး (အမရေိကနျ သမ်မတ)၊ Helen Keller
၆ ဆိုရငျ စိတျကူးယဉျ ဆနျသူ (သို့) သဘာဝအလှတှေ၊ သဘာဝ အဖွဈအပကျြတှကေို စိတျကူးဖွငျ့ ဖျောနရောမှာ စိတျကူးကောငျးသူ
၆ တှဟော ပြျောပြျောနတေတျသူတှဖွေဈပါတယျ။ မိသားစု စုစုဝေးဝေး နဲ့ နထေိုငျရတာကို သဘောကသြူတှေ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဟာ သစ်စာ ရှိသူ ဖွဈပွီး သူတဈပါး နားလညျသဘောပေါကျအောငျလညျး စှမျး ဆောငျ နိုငျသူ ဖွဈရာ ဆရာအလုပျတှမှော အောငျမွငျတတျပါတယျ။ သူငယျခငျြး အပေါငျးအသငျးတှကေို သစ်စာရှိသူဖွဈရာ မိမိကိုယျ သစ်စာမဲ့ ပွု လုပျသှားပါက အငွိုးကွီးစှာဖွငျ့ တဈသကျလုံး မချေါတတျပေ။ သူတို့ဟာ ဈိတျကူး စိတျသနျးကောငျးသဖွငျ့ တခါတရံ လောကကွီးကို သူတိူ့ ဉာဏျပညာဖွငျ့ ပွောငျးလဲပဈတတျပါတယျ။
အောငျမွငျကြျောကွားသူမြား – အိုငျစတိုငျး၊ ကိုလံဘတျ(ဈ)၊ Jane Seymour ( အင်ျဂလနျ ဘုရငျမ)၊ ဒျေါခငျကွညျ ( ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ဇနီး)၊ ဦးညီပု (ပထမဆုံး မွနျမာသရုပျဆောငျမငျးသား)၊ ဦးကြျောဟိနျး (ရုပျရှငျမငျးသား)
၇ ဆိုရငျ ဉာဏျထကျမွကျသူ
၇ တှဟော ရှာဖှရေေးသမားလို့ ပွောလို့ မတတျအောငျကို အကွောငျးအရာ
တခုပွီးတခု အမွဲတမျး လလေ့ာ ရှာဖှေ နတေတျသူပါ။ သူတို့ ကို puzzle game တှေ ဆော့ခိုငျးရငျ အရငျဆုံး အဖွရှောနိုငျသူပါ။ သူတို့ဟာ အလုပျ တခုကို ဘယျတော့မှ တစှတျထိုး မလုပျပါဘူး၊ဖွညျးဖွညျးနဲ့
အောငျ မွငျအောငျ လုပျပါတယျ။ သူတို့ဟာ အတှေးအချေါ ကောငျးသူ တှေ
ဖွဈပွီး ဗဟုသုတ လညျး နှံစပျပါတယျ။ သူတို့တှဟော လြှိဝှကျတတျပါတယျ။ သူတို့ ဘဝကို သူမြားတှေ လာစပျစုတာကို မကွိုကျပါဘူး။ အမွဲတမျး လလေ့ာ နသေူဖွဈရာ ဘာလုပျလုပျ သူမြားထကျကို သာ နတေတျပါတယျ။အောငျမွငျကြျောကွားသူ – ဦးဇာဂနာ၊ ဦးဇျောဝမျး ၊ မငျးသမီး ဒိုငျယာနာ ၊ William Shakespeare ၊ Michael Jackson Galaxy
၈ ဆိုရငျ ပွဿနာရပျရပျတှကေို ဖွရှေငျးနိုငျသူ
၈ တှဟော ပွဿနာအရပျရပျတှကေို ခေါငျးအေးအေး နဲ့ ဖွရှေငျးနိုငျသူ ဖွဈ ပါတယျ။ သူတို့ဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ ဝဖေနျပိုငျးခွားနိုငျစှမျး ရှိသူတှေ ဖွဈပွီး ဆုံးဖွတျခကျြ ခရြာတှလေညျး တိကပြွီး အကြိုးရှိတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ မြိုးတှေ ခတြတျပါတယျ။ သူတို့ဟာ ဘ၀ ကို အေးအေးခမျြးခမျြးနဲ့ ဖွတျသနျး ခငျြသူ တှဖွေဈပွီး ထိုသို့ ဖွတျသနျးဖို့လညျး သူတို့မှာ စနဈတကြ လုပျထား တဲ့ အစီအစဉျတှေ ရှိတတျပါတယျ။ သူတို့ဟာ လူအမြားကို ဦးဆောငျ နိုငျသူတှဖွေဈပွီး လူသားတိုငျးရဲ့ ရညျမှနျးခကျြအမြားစုကို နားလညျ သူ ဖွဈပါတယျ။ လူသားအမြားရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို ဖွညျ့ဆညျး လိုတဲ့ စိတျဆန်ဒတှေ ရှိပွီး ဖွဈအောငျလညျး လုပျပေးနတေဲ့အတှကျ သူတို့ ရဲ့ ဘဝဟာ သူတို့လိုခငျြသလို ဖွဈမလာတတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ မိမိ အတှကျ နဲ့ တပါးသူ တှေ ရဲ့ အတှကျ မြှမြှတတ စဉျးစားပွီး လုပျစလေိုပါတယျ။
အောငျမွငျကြျောကွားသူ – မွနျမာ့ဒီမိုကရစေီခေါငျးဆောငျ
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ (အပျေါက ၈ အကွောငျးကို ဘာသာပွနျရငျး အမစေု ဘယျဂဏနျးလဲ သိခငျြတာ နဲ့ တှကျကွညျ့တော့ ၈ ဂဏနျး ရတာ တှရေ့လို့ ဝမျးနညျးဝမျးသာ ဖွဈရပါတယျ) ၊ ဆရာကွီး ဦးသုခ ၊ Edgar Cayce ( စိတျပညာရှငျ အနောကျနိုငျငံမှာ ဘဝကူးတယျ(သံသရာလညျခွငျး) အဆိုကို လကျတှေ့ မှနျကွောငျး လုပျပွသူ) ၊
၉ ဆိုရငျ ဖြျောဖွသေူ (သို့) ဂရုဏာရှငျ
၉ သမားတှဟော ဖြျောဖွတေကျဆကျတဲ့ဘကျမှာ ထူးခြှနျသူတှေ ဖွဈပါတယျ။
သူတို့ဟာ ဂရုစိုကျတတျတယျ၊ ကူညီရိုငျးပငျးစိတျရှိတယျ နောကျဆုံး သူ့မှာ ပိုကျဆံ ၁ ထောငျပဲ ကနျြလို့ အကူအညီတောငျးလာရငျတောငျ သူ့ပိုကျဆံ ကို သူမြားဆီ စှနျ့ကွဲတတျတယျ။ သူတို့ဟာ ဘဝမှာ ကံကောငျးတတျတယျ၊
ပွငျးပွငျးထနျထနျ အလုပျကွိုးစား စရာမလိုဘဲ စိုငျကျောလို့ ခြုံ ပျေါ ရောကျ ဆိုသကဲ့သို့ မိမိဘကျမှ ကံတရားက အမွဲပါနတေတျတယျ။ ကံအရမျး ကောငျးသူပေ့ါ။အောငျမွငျကြျောကွားသူ – Elvis Presley (ပရကျစလေ ဂန်တဝငျအဆိုတျော) ၊ Jimmy Carter ( အမရေိကနျ သမ်မတ) ၊ Harrison Ford ( India Jones ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ ) ၊ မာသာထရီဆာ( Mother teresa)